AfricaArXiv - Ebe a na-emeghe oghere African Open Access
Ebe pan-African Open Access Portal
AfricaArXiv bu ebe nchekwa dijitalụ nke ndi obodo na-eduzi maka nyocha nke Afrika, na-aru oru iji wuo ulo akwukwo ndi Africa nwere nke ghere oghe; a ihe omuma commons nke ndị ọkà mmụta Africa na-arụ ọrụ iji kpalite Renaissance nke Afrika. Anyị na ndị ọrụ nyocha nke ndị ọkachamara guzobere iji nye usoro maka ndị ọkà mmụta sayensị n'Africa nke ịdọ aka ná ntị ọ bụla iji gosipụta nchọpụta ha na nyocha na ndị ọzọ na-eme nchọpụta na kọntinenti Africa na ụwa niile.
Chekwaa oche gị maka nnọkọ ajụjụ n'okpuru n'okpuru ndị otu anyị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị na ozi@africarxiv.org.
Choputa ntinye ederede na ntinye ndi a:
Nyefee ọrụ nke gị
Nwere ike ịnyefe ihe odide ederede, mbipụta akwụkwọ, ihe ngosi, datasets, na usoro nyocha ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ibe anyị. Chọpụta otu esi eme nke ahụ na info.africarxiv.org/submit/.
Anyi na akwalite nchoputa nke ihe nchoputa nke Afrika site na oru dika usoro na ndi otu a:
AREkpụrụ Nlekọta maka Gọọmentị Datamụ Amaala
Nkwupụta San Francisco na Ntụle nyocha
Helsinki Initiative na Multilingualism na Nkwukọrịta Mmụta
COAR Community Framework maka Ezi Omume na Repositories
>> Gụkwuo banyere AfricArXiv.
Ntugharị ngwa ngwa gụrụ: otu esi amalite ya https://t.co/KOUOhq7sYd
Anyị butere AfricaArXiv na June 2018 na-eche maka ntụnye akwụkwọ mmemme pan-African na ọtụtụ eburu n'uche: pic.twitter.com/cogcBck5ux
Kekọrịta nyocha gị na Asụsụ Africa
Mee ka nsonaazụ gị pụta ma tinye akwụkwọ ikike CC-BY
Eme Nkuzi omumuihe, mepee uzo na uzo mmeghe
Akuko gbasara uzo a na-emeghe na Africa
Choputa nyocha ndi ozo n’Afrika
AfricanArXiv kwadebere na OSF
Ihe odide edere edere nke edere na AfricArXiv site na Open Science Framework (OSF).
Ebe Dijitalụ Nnyocha
Ndepụta nke ebe nchekwa n'ime kọntinenti Afrika.
Akwụkwọ Akụkọ Afrika Online
Ọbá akwụkwọ dị n'ịntanetị nke nyocha ndị ọgbọ, akwụkwọ ọgụgụ ndị Afrịka bipụtara.
Nnyocha nyocha nke AAS
Okwute maka mbipụta ngwa ngwa na nyocha nke ndị ọgbọ.
'Africa' Map Ọmụma Ihe Ọmụma
Nsonaazụ ọchụchọ a dabere na metadata na isiokwu ya wee banye na 'Africa'.
Nsonaazụ BASE dị n'Africa
Igwe eji achọta ihe ntoputa kachasị mkpa maka ihe mmụta weebụ.